न प्रतिपक्ष, न जनता ?
लोकतन्त्र, विपक्षीविहीन भएको छ । पञ्चायतमा राष्ट्रिय पञ्चायत विपक्षी विहीन हुनेगथ्र्यो । अहिले संसद त्यही हालतमा पुगेको छ । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षको सुखसुविधा भने नेपाली कांग्रेसले हजम गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष कांग्रेस, सभापति देउवा यतिसम्म लाचार, अन्यौलग्रस्त र हतास छन् कि उनी आफ्नै पार्टी सञ्चालनमा असक्षम देखिएका छन् । उनले सत्तारुढ दललाई कसरी सही मार्गमा ल्याउन सक्थे र ? यति धेरै मुद्दा छन्, भ्रष्टाचारदेखि सीमा अतिक्रमणसम्म, अपारधदेखि अपराधीकरणसम्म सत्तारुढ दल हावी छ, त्यति हुँदा पनि प्रतिपक्ष बोल्नै सक्दैन, मानौं प्रतिपक्षलाई सन्निपात भएको छ ।
कांग्रेसको त यो गति अरु साना पार्टीको के गति ? नेपाली कांग्रेस त हतासमात्र होइन, नेकपासँग त्रसितसमेत भएको अनुभव गर्न सकिन्छ । कारण एकपछि अर्को गर्दै खुल्दै गइरहेका विभिन्न घोटाला, काण्डहरु लगायत राष्ट्रघातसम्ममा कांग्रेसीहरुको नाम जोडिने गरेका छन् । विश्लेषकहरु विपक्षी छ तर प्रभावहीनता कारण सत्तापक्ष निरंकूश बन्दै गएको बताउँछन् । अझ उनीहरु त बिस्तार बिस्तार लोकतन्त्रको आवरणमा कम्युनिजतन्त्रको जग हाल्न खोजिदै छ भन्छन् । सरकारे बिरोध, व्यङ्ग, कमीकमजोरीको सार्वजनिक आलोचना गर्नेमाथि कारवाही गर्ने खालको कानुन तर्जुमा गर्न खोजिदा पनि प्रतिपक्षी निदाएर बसेको छ । चिन्तकहरु भन्छन्– जब जब कांग्रेसीहरु सरकारका कमीकमजोरी र गल्ती केलाउन थाल्छन्, सत्ताधारी प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्म तत्कालीन देउवा सरकारले गरेका काण्डका सिलसिलेवार कथा सुनाउन थाल्छन् । अझ त्यतिले नपुगेर वीपी कोइरालादेखि गिरिजा अझ त्यतिले नपुगेर वीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसादसम्मले गरेका राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार त नेकपालाई कठस्थ छ । यसरी धराप थापेकैले कांग्रेसी प्रतिपक्षमा छ कि छैन भन्ने स्थिति सिर्जना भएको हो । भारतले कव्जा गरेको कालापानीदेखि एनसेल, ललिता निवास, वाइडबडी विमान खरिद अनि नेपाल ट्रष्टले जबरजस्ती यती समूहलाई सित्तैजस्तो लिजमा दिने निर्णय भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस फसिसकेको छ । यिनै कारणले नेपाली कांग्रेसको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ, सत्ताधारीजस्तै देखिन्छ ।
यसमाथि आन्तरिक रुपमा गुट उपगुट र आफ्नै वर्चस्वका कारण ठूलै किचलोमा फसेको छ कांग्रेस । कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्धामा स्पष्ट छैन र जनतामा आलोच्य बन्दै गएको छ कांग्रेस । यसैवीच एमसीसीका सम्बन्धमा अमेरिकी राजदूत नै अगाडि सरेर नेपाली भाषामै एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धनका लागि नभएर आर्थिक साझेदारीका लागिमात्र हो भन्ने व्यापक प्रचार अभियानमा जुटेका छन् । देशका कुनै पनि मामिलामा, संविधानको बीचबचाउमा समेत खुलेर उभिन नसक्नाले प्रतिपक्षी कांग्रेस राजनीतिक रुपमा पुरै फेल भइसकेको छ ।
अर्थात नाम लोकतन्त्त छ, नेकपाको एक दलीयतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । छाडा सत्ताधारी दल अनि कमजोर प्रतिपक्षी । नेपालको शासन व्यवस्था यही मनलागी हो । जनता पनि बिभाजित मनस्थितिमा छन् । आफ्ना प्रतिनिधिले आफैमाथि ज्यादतीपूर्ण शासन गर्दा पनि बोल्दैनन् । चुपचाप छन् । शक्तिशाली मिडिया र नेताको लहैलहैमा लागेर जनता हातको न पातको भइरहेका छन् । अव एमसीसी पास हुन्छ, अमेरिकी सेना नेपालमा आएर बस्छन् भन्नेमा जनता विश्वस्त हुनथालेका छन् । बुझ्नेहरु यसलाई रोक्न सकिन्न भन्ने ठान्छन् । एकथरि चीनविरुद्धको घेराबन्दी मान्दैछन्, अर्कोथरि नेपालमा रगतको खोलो बग्नेभो भनिरहेका छन् । एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय बहस भएन, संसदमा पनि बहस भएको छैन । प्रतिपक्ष सिधै पास गरौं भनिरहेको छ, नेकपालाई हाइसन्चो देखिन्छ । तर नेकपाको एउटा बलियो तप्का चीनको प्रभावमा छ र पास गर्न दिनुहुन्न पनि भनिरहेका छन् ।
यता उखु किसानले अझै मूल्य पाएका छैनन् । सरकारले किसानलाई छक्याएको छ । किसानको आन्दोलन झन झन चर्किदैछ । यी सम्पूर्ण बिकृतिको जड भनेकै यही शासन व्यवस्था हो । राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, सामाजिक बिकृति, अपराधतन्त्रको जड नै यही व्यवस्था हो भन्ने जबसम्म जनतलो बुझ्दैनन्, तवसम्म नेपाल र नेपालीको नियति यस्तै लुटमा पर्नुहुनेछ । अहिलेसम्म त स्वदेशीले पेलेका छन्, बिस्तारै विदेशीले यही देशमा हामीलाई पैल्ने दिन आउनेवाला छ । अनि चेत्लान जनताले । मतदान गर्न जाने, नेताको पछि लाग्न र जयजयकार गर्न जाने, वचन पूरा नगर्ने, घोषणापत्रअनुसार कााम नगर्ने र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुब्ने नेताहरुलाई दण्ड दिन नै जानेनन् जनताले । जनताको यही व्यवहारले समस्या बढ्दो छ । नेताहरु फुक्काफाल भएर लुटिरहेका छन् ।